I-China FFP3 i-Reprator yeMask abavelisi kunye nabaxhasi | UTianli
Nokuba yi-SARS okanye i-coronavirus pneumonia yinoveli, iimpahla zokhuselo lwezonyango zidlala indima ebalulekileyo ekusasazeni yonke le ntsholongwane, kwaye umgangatho weempahla zokuzikhusela ukhula ngokuthe ngcembe ngokuphuculwa kwetekhnoloji yemveliso. Eli nqaku liza kucacisa ngokulingeneyo ukhuselo lokonyango kwezi zinto zi-4 zilandelayo.
Ukusebenza kwesithintelo Indlela yokuvavanya, indawo yokubonisa isampulu kunye nokuhlelwa kokusebenza komqobo wokukhusela iimpahla kubonisiwe kwiTheyibhile 1. Jonga le theyibhile ingezantsi ngezona ndawo ziphambili zengubo eyahlukileyo.
1. Ukusetyenziswa kwemihla ngemihla kunye nemisebenzi yangaphandle.
3. Ukuhanjiswa kwe-anti Droplet
4. Ungcoliseko lonyango
5. Ukuchasana nothuli
7. Hlunga i-PM2.5, intsholongwane, iintsholongwane, intsholongwane kunye nezinto eziyingozi emoyeni, khusela impilo yakho!
1. Isicelo: ukusetyenziswa kolwakhiwo, ukumbiwa kwemigodi, ilaphu, amayeza okugaya.
2. Izicelo: Ubomi bemihla ngemihla, indawo yokusebenzela, ii-SPA, izibhedlele, iikliniki, isikolo, iindawo zomsebenzi, njl
3. Ukukhuselwa ekulandeleleni iigesi zemvelo kunye nevumba
4. Ukukhuselwa kwamasuntsu aveliswayo ngexesha lokulungiswa kokugaya, ukucoca, ukujonga isarha kunye nokupakisha, okanye ekuqhubeni i-ore, amalahle, i-iron ore, umgubo, isinyithi, umthi, umungu kunye nezinye izinto. Ulwelo okanye into engeyiyo oyile enento eveliswa kukutshiza engakhuphi ioyile yesoyile okanye umphunga. Njengokuphosa, elebhu, ezolimo, ikhemikhali, iprimer, ukucoca, njl.
Ukuqaliswa kwesiseko sezambatho zokhuselo zonyango
Yintoni impahla yokunikhusela kunyango? Inkcazo kunye nokusetyenziswa kwezambatho zokhuselo zonyango.
Ngawaphi amaqela kunye neendidi eziqhelekileyo zeengubo zokhuselo zonyango.
Edlulileyo: N95 igesi yeMask
Okulandelayo: I-polishing Granite kunye nezixhobo zeMarble Fickert Abrasive zezixhobo zeMarble